ỌRAN CHANGHENG bụ a elu-tech enterprise na Shanghai, gafere ISO / TS16949 quality asambodo usoro. Factorylọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi mpaghara nke mita 8000, yana ndị ọrụ karịrị 200, na ntụgharị kwa afọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 400 nde RMB.
SHANGHAI CORBITION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, nke hibere na 2020, nke na-elekwasị anya na ngwa na ngwa ngwa, bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa nọọrọ onwe ha n'okpuru teknụzụ Changheng.
Ọ nwere ihe karịrị ikikere iri atọ maka ihe mepụtara na ngwa ngwa, gụnyere ihe karịrị 10 patent maka ngwaahịa ngwaọrụ ahụike
Kemgbe ọtụtụ afọ, o nyelarị ihe karịrị 100 usoro ngwọta na ịmepụta ngwaahịa, imepụta na ndị ọzọ maka ndị ahịa ụlọ ọrụ ụlọ na ndị mba ọzọ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ndị ahịa ama ama ama dịka ZYbio, Sansure Biotech, Daan-gene, Shanghai PHARMA na na
N'ime afọ 2019, ya na ndị ọrụ BGI rụrụ ọrụ iji nyere Morocco aka ịlụ ọgụ megide COVID. Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ahụ emeriwo ntụkwasị obi na otuto ndị ahịa.
Site na teknụzụ nyocha nke nyocha nke molekụl dị ka isi, CORBITION bụ ụlọ ọrụ teknụzụ ọgwụ na-enye ọtụtụ ihe ngwọta nke na-ejikọ ihe na-ewepụta acid acid, ihe nchọpụta PCR na-arụ ọrụ nke ọma, onye na-achọpụta ngwa ngwa, ndị na-achọpụta ọrịa, ndị na-eri ihe.
A na-arụpụta ọgwụ ọgwụ, nwalee ma tinye ya n'ọmụmụ ihe dị ọcha, nke enweghị ntụ.
Companylọ ọrụ ahụ dị na Dongjing Industrial Park, mpaghara bụ isi nke G60 Kechuang Corridor, Districtjiang District, Shanghai, dị nso na Dongjing Station nke Metro Line 9.
Ngwa ọgwụ agafeela asambodo nnwale mba / anụ ụlọ na asambodo CE, mkpalite liscense etinyela na reacord nke State Food and Drug Administration. Companylọ ọrụ ahụ agafewokwa usoro nlekọta ahụike nke ISO13845.
Ndị mmadụ, ndị ọkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ.
Lekọta ahụike, mmepe na-adigide.